မိမိ လိုချင်တာ ၊ သိချင်တာကို အလွယ်တကူရှာဖွေနည်း ဒေါင်းယူနည်း ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော် skip to main |
မင်္ဂလာပါ.... ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) လေးကို လာရောက်လည်ပတ် အားပေးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေ ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မန်ဘာများအားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း များဖြင့် ပြီးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်း ခင်မင် လေးစားစွာဖြင့် ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သ လိုက်ပါတယ်ခင်မျာ ....
ဒေါင်းမရတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ကလေး နားလည်ပေးလိုက်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်နော် .... :D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ကျနော်တင်သမျှ Post တိုင်းမှာ Dwnload Link တွေကို အရှင်းဆုံး အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ပဲ ညွှန်းပေးပါတော့တယ်... (အလုပ်ရှုပ်စေ အချိန်ကုန်စေတာတွေမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်) ဘာကြော်ငြာမှလည်း မခံတော့ပါဘူး...... နည်းပညာ ဆိုတာလေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး.....
ဒါကြောင့် ကျနော်ဟာ Online ပေါ်မှ ကိုယ့်လိုဝါသနာတူတဲ့ ညီငယ် လူငယ်လေးတွေ တွေ့ရင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး ကျနော့ ဒီ Website ထဲကနေ မိမိတို့ သိထားသလောက် မိမိနှင့်အတူ အများသူငှာ ဗဟုသုတတိုးပွားစေဖို့ မျှဝေပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပြီး အမြဲဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်... ပထမဆုံး ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သူကတော့ ကိုလတ်(ကျွဲဆင်း) ဆိုတဲ့ ညီလေးပါ.... တချို့ကတော့ သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ ရေးသာမျှဝေချင်ပါတယ်ပြောလာလို့ လက်ခံပြီး မျှဝေစေခဲ့ပါတယ်...
ကဲ...... Download ဆွဲတာနဲ့ပါတ်သတ်တာလေး ဆက်ကြဦးစို့.... :)
တချို့တိုင်းပြည်တွေက Website တွေဆိုရင်5စက္ကန့် စောင့်ပေးရတဲ့ Ad.Fly လို ကြော်ငြာ Page တွေကို ၅/၆ ခုအထိ ချိတ်ထားတတ်ကြပါတယ်... ကွန်ပျူတာမှာတော့ AD Blocker လေးကို သက်ဆိုင်ရာ Browser မှာထည့်ထားလိုက်ရင် မလိုအပ်တဲ့ ကြော်ငြာ Page တွေ မတတ်တော့ပါဘူး။ (AD Blocker နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဒီနေရာမှာ အရင်က ရေးဖူးပါတယ် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်)
(ပုံမရှင်းရင် ပုံကို နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ) AD Blocker ထည့်ထားရင် Disable လုပ်ခိုင်းပါတယ်.. Disable မလုပ်ရင် အဲ့ဒီနေရာကနေ ဘယ်လိုမှ ဆက်သွားလို့မရပါဘူး...
သူတို့ကို နှိပ်ချင်အောင်လည်း လှုပ်လှုပ် ရွရွ နဲ့ ခုန်ပေါက်နေကြပြန်ပါသေးတယ်.... သင့်စက်မှာ Virus တွေရှိနေပါတယ် ဒါကိုနှိပ် Install လုပ်ပါ ဘာညာနဲ့ပေါ့... အခန့်မသင့်လို့ နှိပ်မိလိုက်ရင် Page တစ်ခု
(New Window) နဲ့ အလိုလျှောက်ပွင့်သွားစေပါတယ်... အဲ့ဒီ Page ကိုရောက်တာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အရုပ်နဲ့ ကြော်ငြာတာ အားမရလို့ Video နဲ့ပါကြော်ငြာနေပါတော့တယ်.... Cancel ကို ဘယ်လောက် နှိပ်နှိပ် တော်ရုံနဲ့ ပေးမထွက်ပြန်ပါဘူး... Cancel ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ တကယ်ထွက်သွားတော့မလို့လား... နေပါဦး နောင်ကြီးရာ... ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက် ဘာညာဆိုပြီး သူတို့ပြောတာတွေ ၊ ရေးထားတာတွေကို ဇွတ်အတင်း ကြည့်ခိုင်းနေတတ်ပါတယ် ... ဟိုဟာ နှိပ်ခိုင်း သည်ဟာနှိပ်ခိုင်းနဲ့ ၃/၄ ချက်နှိပ်ပေးပြီးမှ ပြန်ထွက်လို့ရတတ်ပါတယ်.. အမှန်တကယ် နှိပ်ပေးရမဲ့ နေရာက အပေါ်ဆုံး ညာဘက်အစွန်က (အပြာရောင်နဲ့) skip (or) SKIP AD ကိုပဲ နှိပ်ရမှာပါ....
တချို့ User တွေက အနီရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့ Download Button တွေကို မှားနှိပ်မိတတ်ကြပါတယ်.... Virus တွေတင်ပေးနေပါတယ်တို့ ဒေါင်းမရဘူး အဆင်မပြေဘူးတို့ဆိုတာ ...
တခါတရံ Download Button ကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံနဲ့ မရပြန်ပါဘူး အနည်းဆုံး ၃ ချက်လောက်နှိပ်ပေးရပါတယ်... ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင် အဆင်ပြေအောင် ကျော်လွှားနိုင်ပေမဲ့........ ဒီနေရာမှာ....အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူတစ်ယောက်က လက်ကိုင်ဖုန်းကနေတဆင့် ဒေါင်းယူခဲ့မယ်ဆိုရင်... ကျနော်ထင်ပါတယ် ဒေါင်းမရဘူးကွာ ဆိုပြီး လှည့်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်... သက်ဆိုင်ရာ ဝက်ဆိုက်မှာလည်း ဒေါင်းမရတဲ့အကြောင်း (သို့) Virus ဖြစ်နေပါတယ် ဆိုပြီး ပေါက်ကရ ရေးသွားပါလိမ့်မယ်..။
အတင်ခံတဲ့ ဆိုက်ဒ်ကလည်း Free နှင့် တန်အောင် ($) ရဖို့ နှစ်ချက် သုံးချက် ထပ်နှိပ်စေပါတယ်...:) Download Button ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တိုင်းလည်း မိမိဖုန်းကို သတိထားကြည့်ပါ... မိမိလိုချင်တဲ့ Software မဟုတ်ပဲ Virus လိုမျိုး Launcher တစ်ခုခု သို့မဟုတ် APK တစ်ခုခုကို အော်တိုမက်တစ် ဒေါင်းယူနေတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်... (၁၀)ချက်နှိပ်ရင် (၁၀)ခု အော်မက်တစ် ဒေါင်းယူနေတတ်ပါတယ်..။ အဲ့ဒီ Apk ကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Softwre ထင်ပြီး Install လုပ်လိုက်မိရင်တော့ ဖုန်းဟာ အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ ပုံစံတွေ ပြောင်းသွားပြီး ကြာလာတာနဲ့အမျှ လေးလန်စေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာစေမှာပါ..။ "ကျနော့ဖုန်းက လေးတယ် အရင်လို သုံးလို့မကောင်းတော့ဘူး" ဆိုတာ ဒီက စ,တာပါပဲ... အဲ့ဒီလို အကြိမ်ကြမ်မနှိပ်ပဲ ဒေါင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားလို့ မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပါတယ်... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့..... မိမိဒေါင်းယူလေ့ရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Hosting ဆိုက်ဒ်တခုခုမှာ Register လုပ် $ ပေးပြီး Premium Account (VIP) နဲ့ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... :) ကျနော်ထင်ပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်နေသူလောက်ကလွဲပြီး Software လေးတစ်ခုအတွက် $ ပေးပြီး ဒေါင်းယူရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ဒေါင်းယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး.... :D
ဒီနည်းအတိုင်း အင်တာနက်ပေါ်က အခြားနေရာတွေမှာလည်း ရှာနိုင်ပါတယ်..။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ဒါကတော့ ကျနော့ ဒီ Website ထဲမှာ အလွယ်တကူရှာဖို့ပါ... ကဏ္ဍ အလိုက် ခွဲထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် တွေကို အပေါ်ကပုံလေးမှာ ပြထားသလို Tags ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး...
ဘယ်လို Install လုပ်ရမယ်.. ဘယ်လို Searil Key ထည့်ရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေကို Software နဲ့အတူ Read သို့မဟုတ် Read
Me စ,တဲ့ Notepad ဖိုင်လ်လေးတွေမှာ ရေးပြီး တခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်...
မသိတာ , မရှိတာလေးတွေကို Facebook Chat box
(သို့) Comment မှာ ရေးပြီး မေးနိုင် တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် .... အားလပ်ချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ သိတာရှိရင် ပြန်ဖြေပေးနိုင်သလို
တချို့ လုံးဝမသိတာလေးတွေကိုတော့ နားလည်ပေးပါခင်မျာ... ရိုးရိုးသားသား ဝန်ခံပါတယ် .... အလုံးစုံ ကျနော် မသိပါဘူးခင်မျာ... :D
Hi ! Really rare to encounterablog that's both educational and entertaining .It would be good if you visit my website .http://ads.com.mm/?cid=4fd60e94e4b0fa6db841e33c&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_gvisoy&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog
Aung Kyaw Zin Tun
22 November 2012 at 05:47
ကိုဝင်း ပြောတာတွေ အမှန်ပဲဗျ.တချို.က "ကိုယ်တိုင် အားစိုက်ထုတ်မှု မ၈ှိ" ဆိုတာလေ.သူငယ်ချင်းတယောက်က " ဟေ့ကောင် မင်းရဲ့ software က ဘာ Full Version မှလဲ မဟုတ် ပဲနဲ့" ပြောလို့ သွားကြည့်လိုက်တော့ Patch ကို (C:Software Directory) ထဲ ဒီအတိုင်း ဘာမှ မလုပ်ပဲ ထည့်ထားလေရဲ့
နည်းပညာမျှဝေပေးတဲ့ အကိုတွေ အားလုံးကို လေးစားပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ......
pon yate whlar
14 January 2014 at 05:55
ကွန်ပြူတာ မှာ ဖိုင်းယားဖေါက်သုံးပါတယ်..ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့် နှစ်ခုသုံးခု တပြိုင်တည်းသုံးနိုင်တဲ့ Add လေး လိုချင်လို့ ပါ...ကျေးဇူးပြုပေးပါ။။
Browser တစ်ခုထဲမှာ Facebook , Gmail , twitter အကောင့် နှစ်ခု သုံးခု တစ်ပြိုင်ထဲသုံးချင်ရင်http://www.winkabarkyaw.net/2012/11/browser-facebook-gmail.html
ios7 ကိုJailbreak လုပ်တာ ဖုန်းကပြန်တက်လာတော့ ပန်းသီးပုံကလွဲပြီးဘာမှလဲမမြင် ဘာမှလဲလုပ်မရတော့ဘူး..ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပါဦးဗျာ
1 February 2014 at 19:26
အကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် တခုလောက်ကူညီပါဦး ကျတော့်ဖုန်း samsung galaxy note 2ကို update လုပ်လိုက်တာ မြန်မာစာမရတော့လို့ အဲ့ဒါနဲ့ ကျတော်လည်း root လုပ်လိုက်တာ rootကရသွားတယ် ဒါပေမယ့်မြန်မာစာကဘယ်လိုမှထည့်လို့မရဖူး uninstall ပဲလုပ်ခိုင်းနေတယ် နောက်တော့ကျတော်လည်း phone ကို resetချကြည့်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာ resetချပြီး ပြန်ပေါ်လာတာက samsung logoကနေဘာမှတက်မလာတော့လို့ ကျေးဇူးပြူပြီး ကူညီပါဦးနော် U ko
အကို ကျွန်တော်ကို facebook အကောင့်ဖွင့်နည်းလေးပြောပြပေးပါလား အကို Please Shwepyi Thar
mg mg Saw
HellloAdmin :U needaMore $$$$$$$$$$$$$$$$$$I am interesting in advertising to your website/blog. You can Contact me at thisSkype ID: bad.boy0007Ph : +92311-0788888 As soon as possible
ကျွန်တောကွန်ပျူတာ တစ်ခုခု ကို ဒေါင်းနေ၇င်း စက်ထဲ့က သီချင်းဖွင့်လိုက်၇င် ဗျစ်ဗျစ်နဲ့ အသံထွက်လာလိုက် ၇ုပ်၇ှင်ဖွင့်၇င်လည်း ထစ်ထစ် သွားတယ် ဘာဖြစ်တာလည်း မသိဘူးဟစ်ဒတ်လည်း အသစ်လည်းထားတာ ခင်ဗျ အင်တာနက်မသုံးပဲကြည်၇င်အကုန်အကောင်း ဗျပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ လေးစားပါတယ်
Very informative website. Thank you.www.mobiemyanmar.com
Cedrat_Flux_11.2Electrical Engineer တွေသုံးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါညီမတစ်ယောက် Thesis လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်နေလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
27 July 2015 at 13:31
ThanksG730coo y'all marking dost photo y'all chin ta
How to install myanmar font and keyboard for latest version osx EL capitan......help......pls reply your message thank you
I getalot of great information from this blog. Thanks for sharing this valuable information to our vision. You have postedatrust worthy blog keep sharing.Laptop service centers in Hyderabad
hi bro,အငဲ ကိုး cover design ဆွဲထားတဲ့ software နာမည်လေးသိချင်လို့ပါ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အရောင်တူစီထားတဲပုံနဲဟာလေးပါမြန်မြန်လေးပြောပေးပါနော်
Hisense u988myammarfontလေးရယ် ဖန်ဝယ်ရယ်ရှာပေးပါလားအက်ု
vivo y28 ကို fastboot ၀င်​တယ်​အစ်​ကို toot ​ဖောက်​တာpcက cmdနဲ့ က​နေ fastboot device ရိုက်​တယ်​fastboot flash boot boot.img ရိုက်​တယ်​ reboot မလုပ်​ပဲကြိုးဖြုတ်​တယ်​logoတင်​ရပ်​​နေလို့ ​ခေါင်းစား​နေပါတယ်​​ဗျာကူညီပါဦးအစ်​ကို
MMT account business က ရက်​​ပေါင်း၉၀ ပဲ ​ပေးထားပါတယ်​အဲဒီ soft ware ရဲ့ crack file,patch,key ဖစ်​ဖစ်​ ကူညီရှာ​ပေးပါဆရာကျွန်​​တော်​ ရှာတာ​တော်​​တော်​စုံ​နေပီ မ​တွေ့လို့ ဆရာရှိအကူအညီ​တောင်းတာပါ
MMT account business အတွက် ဒီအောက်က Key ကို ထည့်ကြည့်ပါခင်မျာ....Serial: P9#2*sD@lsj3/%KdsR$+Mn